IOS 7 ifikelela kuma-90% kwimarike | IPhone iindaba
UJose Azambuya | | iOS 7
U-Apple upapashe uhlaziyo olunomdla malunga nokungena kwenkqubo yalo yokusebenza entsha ye-iOS 7. Ngokutsho kwenkampani yeCupertino, IOS 7 sele ingekho ngaphantsi kwe-90% yentengiso. Ukufika kula manani, iApple isebenzise iVenkile yayo yeApple njengereferensi, kuvavanywa bonke abo bangenileyo kule venkile ngexesha leentsuku ezisixhenxe eziphele ngoJulayi 7 odlulileyo. Akucaci nangona kunjalo, inani labantu abasebenza phantsi kweenguqulelo ze-iOS 13.
Ngayiphi na imeko, ziindaba ezimnandi zeApple ezibonayo ukuba zinjani Ukwahlulwa kwemakethi akuyongxaki ekhoyo kwiqonga lakho leselulal, ngokungafaniyo ne-Android eyingxaki malunga noku. Inkampani yaseCupertino iye yaya phambili kwaye yasibonisa ukuba a I-9% yezixhobo ze-iOS ezisebenzayo ziqhuba i-iOS 6.0 kwaye yi-2% kuphela ebalekayo kunye nohlobo oludala. Ngokucacileyo, nawuphina umntu owaziyo ukongeza uya kubona ukuba isiphumo salepesenti sisibonelela nge-101%, engaphezulu kokunokwenzeka ukuba i-Apple ijikeleze kwezi meko. Sonke siyazi ukuba iApple ithe phithi yiminimalism kwaye kuninzi "ubuncinci" ukuthi "90%" kunokuba uthi "89.72%."
Ngayiphi na imeko, amanani anikezwe yiApple nawo kufuneka athathwe ngononophelo oluthile. Kwaye kukuba ngaphandle kwamanani anikezelwa yinkampani uqobo, ithathela ingqalelo kuphela abo bafikelele kwiVenkile yeApple ngeveki. Mna ndine-iOS 7 kwaye andifikeleli kwiVenkile yeVenkile kwiiveki ezi-3. Ngale ndlela, ukuba ungena kwiVenkile yeApple kuyacaca ukuba "ubandakanyeka" ngakumbi kwisixhobo sakho kwaye ngenxa yoko kunokwenzeka ukuba ube nohlobo lwamva nje lwenkqubo yokusebenza. Abo bafake izicelo ezi-3 okanye ezi-4 okoko i-iPhone yathengwa ngo-2011 kunokwenzeka ukuba baqhubeke nokuqhuba i-iOS 6 kwaye bangangeni kwiVenkile yeApple, ke isifundo kufuneka sithathwe kwinqanaba elithile lokuthandabuza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 7 » IOS 7 ifikelela kwiipesenti ezingama-90 zentengiso
Isihloko esithile setabloid, akunjalo?
Impendulo encinci ngaphandle kwendawo akunjalo? Hayi indlela abanzima ngayo abantu abangafuni okungakumbi ukuthetha ububhanxa malunga nezithuba ezikweli phepha ... mama wam!
Kutheni le nto i-tabloid? UGoogle upapasha le datha inyanga nenyanga, lulwazi, akukho nto iyenye.
Ndithetha umxholo: ndakuyibona into yokuqala endicinga ukuba iyintoni kodwa uthini, ukuba intengiso iyi-80% ye-android! Emva koko ufunda iindaba kwaye uyabona ukuba le nto bendifuna ukuyithetha kukuba ngaphakathi kwe-ios ecosystem 90% yezixhobo zihlaziyiwe zaya kwi-i7. Iya kuba tyheli okanye isigqibo esibi kodwa kubonakala kum ukuba isihloko asisesona silungileyo. Uluvo lwam, kunjalo
Uxolo, andizenzanga ngathi ndisindwa, nangona nam ndingazenzi ngathi ndiluvuyo lomyezo. Ngayiphi na imeko, andicingi ukuba ndithethile nayiphi na inkunzi yenkomo. Wonke umntu unendawo yakhe yokujonga okanye umbono wakhe. Kwaye nxamnye neli phepha andinanto, ngapha koko andizukuyijonga, kodwa kuba bekuvumela ukuba uguqe, ndiyakwenza oko.
Umcimbi kukuba, zingaphi iipesenti zelo pesenti bonwabe ngokwenene okanye bafuna ukuba ne-iOS 7? Kungenxa yokuba awunakunyanzela abasebenzisi ukuba bafake i-iOS 7 kwaye emva koko baqhayise ngepesenti leyo.
Ngokoluvo lwam kubonakala kum kuyilo olubi kuzo zonke iinkqubo zokusebenza ezikhoyo namhlanje. Ekuphela kwento endiyibonayo imhlophe, mhlophe mhlophe nokungabikho kokungafaniyo, imida kunye nokwenza mnyama, into eyenza kubelula ukubona nokuhlukanisa ii icon kunye nokukhetha.
Ungayichazanga intsebenzo. I-iPhone 5 yam ene-iOS 6 ibingcono kakhulu kwaye ikhawuleza kune-5S yangoku endinayo. Andonwabanga kwaye ngokuqinisekileyo ndiya kulinda utshintsho kwimikhwa, zombini kubungakanani bescreen kunye noyilo lokulandela, ukuvuselela ifowuni yam.
I-Dropbox ikhawulezisa ixesha lokuvumelanisa ngesiqingatha